トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [Horukon Set asan'ny fanahy]
Rehefa be dia be ny olona izay nandeha milalao ao amin'ny pachinko efi-trano, mihevitra aho fa ny mijery ny antontan-kevitra ao amin'ny angon-drakitra jiro. Raha tsy mijery ny antontan-kevitra, izay ny sehatra no karazana mikoriana, tsy mahalala izany efa tonga amin'ny. Data jiro dia ny angon-drakitra vaovao ny mpanjifa. Toy izany koa ho toy izany, manana milina izay ihany koa ao amin'ny fivarotana ny angon-drakitra mba hanolo jiro.
pachinko efi-trano sy Horukon, dia nahavita ao amin'ny milina izay voalaza fa ara-solosaina fivarotana ny tahirin-kevitra iray manontolo. Raha niresaka ny zavatra hita ao Horukon, miteny amin'ny tsirairay amin'ny lalao latabatra, ny isan'ny implantation sy ny jackpot imbetsaka sy nampidirina vola, ary, fa ny zavatra efa tonga teo am-tahan'ny tena, no ninonoanao ka mandra-tahirin-kevitra dia antsoina hoe ny milina fivakisana ianao.
hafa koa, ary samy aggregate tahirin-kevitra sy ny toeram-pivarotana rehetra ny aggregate tahirin-kevitra isaky ny nosy, tsy maintsy araka ny marina mitantana ny tahirin-kevitra isan-karazany.
Horukon, dia tsy maintsy mampitombo ny tahirin-kevitra marina, noho ny fisiany, pachinko lafiny efi-trano, tany am-boalohany sy ny tsy fahombiazana mamantatra hijoro Goto nahita ny asa, koa, ary afaka ihany koa ny mijery ny zava-manahirana toy ny wiring dia avy aho. Ao amin'ny
eny an-dalambe, na ny fisamborana napetrako fomba izay hoy izy tamin'i Horukon voasambotra. Eny tokoa, dia toa tahaka ny misy ihany koa ny Horukon fa ny toy izany dia afaka ny ho asa. Eny ary inona no nanao ny efitrano conserver f?fana, izay voalaza ihany koa nantsoina hoe Win lalin-tsaina ny fahazarana Horukon ity. Araka ny fiovam-
payout sy ny mety ho ny toe-javatra ny toeram-pivarotana, dia nilaza fa mety ho ny fandidiana. Koa satria Horukon ihany koa ny milina, ianao izay tonga avy no zavatra antsoina hoe fahazarana ny milina.
, ohatra, izay matetika antsoina hoe, mba hampisehoana toka jackpot dia Volley tokan-tena rehetra, ka dia nivoaka avy baolina, fiara vitsivitsy isaky ny nosy, asio baolina na, tsara ihany zorony latabatra no toka voa, ny faran'ny ny isa, dia voalaza fa afaka na fanahy iniana navoaka payout vondrona manokana.
handeha hisambotra, hitily dia Horukon nahasamborana fomba.
_x000D Ao amin'ny _, na ny mahita toerana manokana dia rehefa manao Horukon mangalatra?
Horukon dia tsy natao hanitsy ny tsirairay payout hotetehina, dia azo lazaina fa fitaovana isaky ny vongany ny taranaka maro.
Mazava ho azy, tahaka ny any, toy ny avy any amin'ny vondrona dimy lany ny rakitra soa ao amin'ny vondrona, ary izany dia mety hamorona bahoaka tsotra toy izany, satria izay mazava mampiahiahy mieritreritra, na dia nifalihavanja iray, Kakudai na, na, nozaraina ho isan'ny milina tsirairay dia, ny nosy rehetra, sy ny sisa, misy fomba isan-karazany amin'ny alalan'ny fivarotana. By jereo ny alalan 'izany, dia mampitombo ny mety mba hahazoana mijoro mafy.
Horukon koa re lahateny izay mety ihany koa ho toy ny hamotsotra ny baolina avy ny fotoana sasany ihany. Inona no matetika mba miezaka ny hamoaka ny payout ny tsena ao amin'ny faritra na oviana na oviana, dia ho tonga any an fijery amin'ny alalan'ny fanatrehana ela. Ohatra, ny hetsika dia amin'ny Fiozao ara-potoana ho lasa tampon'isan'ny, toy ny ho mety hitahiry fa tianao hahaliana ny hafa ny mpividy mba hanafaka ny payout, isa-maraina, ary mivoaka any amin'ny kely Fiozao ara-potoana ny mpanatrika, favoring ny ny olona tao dia tanteraka izany tantara araka izay azo atao.
na mandeha foana ao amin 'ny andro amin'ny herinandro, daty
Fiozao ara-potoana, dia mety fahazarana tonga ao izy ireo nitandrina tsara. Hijery mialoha na somary mamy, dia toy izany hatrany izany na ny mamy no tsara amin'ny andavanandro. Mba miezaka ny hitandrina ny endri-javatra ny rakitra soa, fa amin'ny alalan'ny.
Horukon fomba fisamborana dia ho an'ny mpomba sy mpanohitra miady an-trano, ny olona sasany mihevitra fa mampiasa ny toeram-pivarotana maro, misy ny olona izay tsy hampiasa zavatra toy izany. Hoy aho na dia tsara momba ny fomba nahasamborana Horukon. Ankoatra na ratsy Horukon tsara, mazava ho azy fa manokana latabatra, nosy ihany no manokana, satria mahita ny toerana izay efa nipoaka ihany indraindray ny andro. Na dia ny
filokana, pachinko fivarotana mahalala Aza mitsahatra namoaka nihaza sy ny tombony.
koa, rehefa manao ny karazana hetsika manokana (ohatra :! Eva mafy fanelanelanana), ihany no tena fantsika fanitsiana, na dia ho afaka ny liven ny Eva ny nosy? Na Gabagaba hihavian'ny fihantonan-javatra, izay ny tsy te-hanokatra rehefa mazava be ny hita, dia toy izany hoe raha, ka mitsang?na, hira be toy izany dia mety 1/400 dia, koa dia ho afaka ny superimpose ny conveniently jackpot inona vondrona UGA?
ny saika ny fanakatonana ny hetsika toy izany, dia tokony ho nahatsikaritra mba hanamarinana ny angon-drakitra Robo. Husband mazava lehibe no avo hira mety. Zavatra toy izany dia isan'andro manjo intsony. In ?ry aho amin'ny fanajana ny iray Horukon hatraiza fomba fisamborana, dia tsy ao an-fihetsika tsara.